♪ Angel Shaper: နှလုံးသား Password!!!!!!!
တိုးရင်လဲ white hacker နဲ့ပဲတိုးပါစေလို့
login လာမဝင်တာကြာရင် remind mail send လိုက်လေ
ခုလိုချိန်မှာ Hecker တ္ဂေပေါနေတယ်ဆိုတော့
Hecking လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျ...း)
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေး အခေါ်နဲ့ အရေးအသားလေးပါ။ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရပ်နဲ့ ဆင်ဆင်တူနေတာမို့ ခံစားသွားတယ် ....
password recovery ရှိတယ်လေ.. second mail ပေးမထားဘူးလား.. Question တွေမှတ်မိရင်လည်းရပါတယ်... မရရင်လည်း အသစ်သာလုပ်လိုက်..
သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဟာ..စိတ်တူကိုယ်တူ..
တခါတလေ ပတ်စ်ဝတ်မေ့သွားတဲ့ အကောင့်အတခုကို စိတ်မရှည်စွာနဲ့ မေ့ပစ်ကြတယ်.. တခါတလေ ပြန်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားချင်လာပြန်တယ်... ကျွန်တော်ကတော့ Recovery လုပ်ပစ်မယ်.. ပြန်ပြီးတော့ Edit လုပ်မယ်.. လုပ်လို့မှမရရင် Cancel Account လုပ်ရတော့မှာပေါ့.....
25 July 2009 at 18:38
ပုံဖော်သွားတာလေး အရမ်းကြိုက်တယ် သူက password မေ့နေတယ်ပြောရင်.... forgot your password ? ရှိတယ်ပြောလိုက်လေ....း) ။ ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ့်နှလုံးသားကို Sign up ထပ်လုပ်ပြီး...ပျော်ရွှင်စွာ.ဘ၀ တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မယ့်သူ ပေါ်လာဦးမှာပေါ့...
အနော် password သိတယ်ဗျို့
password ပြောပြမယ်လေ မုန့်ကျွေးမလား.... :P
user name ပြောင်းပြီး account သစ်တခုထပ်ဖွင့်ဘို့အကြံပေးချင်ပါတယ်...
ဟဟဟ ကိုသားကြီးမမေးဘူး ဒီတခါ ညီမမေးမယ် ကိုယ်တွေ့လားဟင် ဟာာားးးးဟားးးးးးးးးးးးး
အကောင်းဆုံးမ အဲ ပြေမယ် မာနတွေ ခဝါချလိုက်ပါ တကယ်ချစ်ရင်လေ အဲဒီမာနကြီးကမကောင်းပါဘူး မမရာ မျိုးကျော့မြိုင်သီချင်းတောင် ရှိသေးတယ် ဘာတဲ့ မာနတွေ ခဝါချကာ အချစ်ရဲ့အောက်မှာ ဒူးတွေ ထောက်ကြဆိုတာလေ ဘယ်လောက်ကောင်းတုံး မဟုတ်ဘူးလား လူတိုင်း အချစ်နဲ့ မကင်းနိုင်ကြသလို မာနလဲ မကင်းနိုင်ကြပါဘူး
ဟဲဟဲ ဆရာလုပ်သလိုများ ဖြစ်သွားလားမသိဘူး ဟဟဟဟ ဂလိုဆိုလဲ ဆော်တီးး
ပြောမလို့ မမအိန်ဂျယ်ရေ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကိုသားကြီးနောက်မှာ အမြဲတမ်း မမက မန့်နေတာလဲ လို့ ဟားးဟားးးးးး အခုမေးတောင်မမေးရသေးဘူး သူကအရင်ဖြေတယ် ဟွန်းးးးးး
ဘယ်သူဖွင့်တယ်ဆိုတာ သိထားတဲ့နောက်မှာတော့ password ဆိုတာ ဘာလုပ်ဖို့တုန်း .. မူမနေနဲ့ သူဆိုတာသေချာနေမှတော့ ပေးလိုက်တော့ ၀င်ခွင့်..
27 July 2009 at 05:28
password တွေ ခနခန မေ့တတ်သူ တယောက်ပါ(အဲ ဘာမှ ဆိုင်ဘူးထင်တယ်)
rose of sharon ပြောသလို account အသစ်ထပ်ဖွင့်တာ ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့။ မခက်ပါဘူးနော်။
ဖြူစင်ရေ အလည်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲနော် ဟိဟိ
အနော်လို့ပဲ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ပါနော် ဘာလို့ဆိုတော့လေ
အဲ့နာမည်လေးကလေ ရာဇဝင်ရှိတယ် သိလား
ဟိဟိ နောက်မှ ပြောပြမယ်နော် ဒိုင်လျှိုလေးပေါ့......
စီဘောက်စ်ကလေ အနော့်ဆီကလာရင် network timeout လို့ပဲ ပြောနေတယ်ကွာ ဝင်လို့လဲ မရဘူး ဒါကြောင့် ကွန်မန့်မှာ လာအော်သွားပါတယ်ဗျို့................
ပတ်စဝပ်သိချင်ရင် တိုးတိုးလေး လာပြောပြမယ်နော်
တကယ်သိတာပါဆို ယုံဘူးလား............. ဟီးဟီး
၀ါးးး ဂျီမေလ်းကနေများ ၀င်လာတာလား အဲဒီဗိုင်းရပ်က :P
နှလုံးသားပတ်စ်ဝခံတာအရေးမကြီးဘူးနော်..XP ဆိုရင် ပတ်စ်ဝဟတ်ပြီးဝင်လို့ ရတယ်နော်..သတိထားအုံး..ဟဲဟဲ..ဟီးဟီး......ဗြဲ.........
ဒေါ်ဒင်းရေ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ငါ့ကိုမခေါ် တော့ဘူးလား အဟင့်ဟင့်ဟင့်
အချစ်စစ်မှာမာနတွေ..မရှိ်ပါဘူး angel .. nice post :)